Imibono yokusetshenziswa kabusha: imibono engcono kakhulu ongayisungula ekhaya | Green Renewables
IsiJalimane Portillo | 04/05/2022 12:00 | Ukusebenzisa kabusha
Ngokwenza kabusha izinto zansuku zonke, ngaphezu kokulondoloza imali kanye nokunikeza ukuthintana kwangempela nokomuntu siqu ezindlini zethu, singanciphisa ukumosha futhi siyihloniphe kakhulu indawo ezungezile. Kuningi imibono yokugaywa kabusha ekhaya kanye nokukwazi ukunikeza impilo yesibili kulokho okungasasebenzi njengoba kwakufanele kube yimfucuza.
Kulesi sihloko sizokunikeza eminye yemibono engcono kakhulu ongayisebenzisa kabusha ekhaya.
1 Ukubaluleka kokugaywa kabusha ekhaya
2 Imibono yokusebenzisa kabusha
2.1 Ibhodlela lepulasitiki njengembiza yezimbali
2.2 Isitsha se-pasta nemifino
2.3 vase ngebhodlela
2.4 Inkomishi yeyogathi yengilazi njengesibambi samakhandlela
2.5 Sebenzisa kabusha ibhaluni elincibilikile
2.6 Isongo Lebhodlela Lepulasitiki
2.7 Isibani ngesipuni sepulasitiki
2.8 Umhleli ngamashubhu amakhadibhodi
2.9 Uhlaka lwesithombe ngembiza
2.10 Isilwane esine-soda cap
2.11 Ishalofu lezincwadi
2.12 Ikhandlela lokuhlobisa elinesivalo
2.13 I-Hanger enamathuluzi amadala
2.14 Isibani esinesibani esidala
2.15 Amabhokisi obucwebe anamabhodlela epulasitiki
Ukubaluleka kokugaywa kabusha ekhaya
Umkhuba wokugaywa kabusha usubaluleke kakhulu eminyakeni yamuva. Lokhu kubonakale kuyindlela engcono kakhulu yokunciphisa inani lemfucuza engcolisa imvelo. Nakuba ukuthenga kwenze lo msebenzi waba nzima ngandlela-thile, abantu abaningi ngokwengeziwe banquma ukuphinda basebenzise ezinye izici zemizi yabo. Nakuba eziningi zingase zibonakale zingenamsebenzi, kukhona amaqhinga nemibono ongayisebenzisa ukuze ugweme ukuyilahla.
Izinzuzo zokudala kabusha ziyafana nalezo zokugaywa kabusha okujwayelekile: ukunakekela imvelo, ukunciphisa ukungcola, ukunciphisa amagesi abamba ukushisa, ukonga imithombo yemvelo futhi, okubaluleke kakhulu, ukuthuthukisa imikhuba yokusebenzisa kahle.
Kodwa-ke, lolu hlobo lokugaywa kabusha lusinika inani elengeziwe: lusisiza ukuthi sikhuthaze ubuhlakani futhi lusenza sibe maningi amathuba okuba sifune izixazululo zansuku zonke ngezinto ezisetshenziswayo, izakhi kanye nemikhiqizo esinayo.
Akukhona nje ukuhlunga nokusebenzisa kabusha, Inzuzo enkulu yobuciko bokuvuselela kabusha iwukwazi ukuthatha lokho esivele sinakho futhi sikunikeze umjikelezo wempilo wesibili noma wesithathu, ngaleyo ndlela kube lula amaphethini okusebenzisa ngendlela efanele.
Indlela enhle kakhulu yokuchitha izikhathi ongenakulibaleka nomndeni wakho futhi ninikeze impilo emikhiqizweni ongasayisebenzisi iwukwenza kabusha okuhlakaniphile. Ngaphezu kwemibono esikunikeza yona kulokhu okuthunyelwe, ungaphinda uhlole umhlahlandlela wethu we-DIY lapho ungathola khona izibonelo zendlela yokwenza ubuciko obumangalisayo.
Ibhodlela lepulasitiki njengembiza yezimbali
Uma ucabanga ukudala ingadi yasemadolobheni, ungagwema ukuthenga amabhodwe futhi ufake isandla ekusetshenzisweni okunomthwalo wemfanelo ngokusebenzisa amabhodlela epulasitiki angenalutho. Nge-cutter ungawasika phakathi, wenze ukusika okuncane phansi ukuze ukhiphe amanzi, futhi uwagcwalise ngomhlabathi ukuze ukwazi ukutshala ngendlela othanda ngayo. Futhi, ingadi yasemadolobheni iyindlela enhle yokukhulisa ukudla kwakho siqu futhi uqale umsebenzi ozosiza hhayi kuphela imvelo, kodwa futhi ingqondo nomzimba.
Isitsha se-pasta nemifino
Lo mbono ukuvumela ukuthi wonge isikhala futhi ugcine le mikhiqizo iyintsha isikhathi eside. njengoba? Sebenzisa amabhodlela epulasitiki, njengeziphuzo ezibandayo, futhi wethule irayisi, uphizi noma i-pasta ukuze uwagcine etholakala.. Ngopende osuselwe emanzini, ungawahlobisa ngaphandle ukuze uthole umsebenzi wokudala owengeziwe futhi uwakhombe ngomaka unomphela ukuze wazi ukuthi aphezu kwani.
Lena indlela yakudala yokugaywa kabusha kobuciko kwamabhodlela engilazi. Ungawapenda ngamavase amahle futhi uhlobise indlu yakho ngendlela yokuqala.
Inkomishi yeyogathi yengilazi njengesibambi samakhandlela
Umsebenzi owodwa walezi zibuko ungasetshenziswa njengezinto eziphambili. Kufanele nje uwageze futhi ubeke ikhandlela kuwo ukuze ukukhanya kubonakale kulo lonke igumbi.
Sebenzisa kabusha ibhaluni elincibilikile
Amabhola ancishisiwe avame ukubekwa emakhoneni ngoba awasafezi inhloso yawo. Kodwa-ke, ngenxa yezinto ezenziwe ngazo, Zingasetshenziselwa ukwenza izikhwama zezemidlalo ezijabulisayo.
Isongo Lebhodlela Lepulasitiki
Sikunikeza umbono ukuze ungawalahli amanzi asebhodleleni noma iziphuzo ezibandayo. Yisike ibe yizicucu bese uyibeka ngezicucu zendwangu ukuze wenze amasongo amahle.
Isibani ngesipuni sepulasitiki
Izinkezo ezilahlwayo ezisele ngesikhathi samaholide zingasetshenziswa kabusha njengezibambi zezibani, vele unqamule ingxenye engezansi, sebenzisa iglue elincanyana futhi unamathisele ngendlela efanele esigubhu noma ebhodleleni lamanzi.
Umhleli ngamashubhu amakhadibhodi
Amashubhu ephepha le-cardboard toilet paper kanye neminye imikhiqizo efanayo ingasetshenziswa ukwenza abahleli bezintambo. Angasetshenziswa futhi ukuhlela izimonyo, amapensela nokunye. Faka ezimbalwa ebhokisini lekhadibhodi bese usebenzisa ngalinye njengesihlukanisi sezakhi ezishiwo. Kulula ukwenza.
Uhlaka lwesithombe ngembiza
Kuqukethe ukufaka izithombe ezitsheni zengilazi. Khona-ke, kuzodingeka uyigcwalise ngamafutha amaningi.
Isilwane esine-soda cap
Ngenxa yokwakheka kwawo, amakepisi e-soda alungele ukwakhiwa nezingane. Isibonelo, ngokuwanamathisela ekhadini, ungenza izilwane ezincane ezinhle zokuhlobisa. Enye indlela enhle ukunamathela emnyango noma esiqandisini esinamazibuthe. Uzoba nokuzijabulisa okulula nokujabulisayo.
Abathandi bezincwadi bavame ukuqongelela izincwadi okungenzeka bangaphinde bazisebenzise. Esikhundleni sokuzilahla, singazisebenzisa kabusha futhi senze leli shelufu elihle. Ngale ndlela, sakha imiphumela emangalisayo ebonakalayo. Inhlonipho ngemibhalo yokuqala ezoshiya wonke umuntu osivakashelayo enkemile.
Ikhandlela lokuhlobisa elinesivalo
Ama-corks avela ezinhlotsheni ezithile zeziphuzo angashintshwa abe amakhandlela amancane okuhlobisa ekamelweni lokuphumula noma ekamelweni. Ngaphezu kwalokho, zilula kakhulu ukwenza. Bagcwalise ngengcina, faka intambo encane kuzo futhi uziyeke ziphumule. Nokho, qaphela njalo ukuthi ngeke bashise lutho eduze kwabo.
I-Hanger enamathuluzi amadala
Lawa mathuluzi azohlala esisiza ngemisebenzi ethile yasekhaya. Nokho, ezinye sezindala kangangokuthi esikhundleni sazo sesifake ubuchwepheshe obengeziwe. Ukuze ugweme ukuwachitha, wasonge futhi uwanamathisele endaweni yokhuni ukuze uthole ama-hangers. Ngale ndlela, uzofeza umhlobiso owusizo futhi we-rustic.
Isibani esinesibani esidala
Ngenxa yengilazi yayo enhle, isibani sinokuthinta okuhle kakhulu futhi silungele ukuhlobisa. Okokuqala, uma unamadala, uwasuse phezulu, uwagcwalise ngamafutha noma ngamanzi, bese uwafaka intambo.
Amabhokisi obucwebe anamabhodlela epulasitiki
Ukuma kwembali phansi kwamabhodlela epulasitiki amaningi ingasetshenziswa ukwenza amabhokisi amahle okuhlobisa ngezingqimba eziningi.
Ngiyethemba ukuthi ngale mibono yokugaywa kabusha unganikela ngezinhlamvu zakho zesihlabathi ukongiwa nokunakekela imvelo.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuvuselelwa Okuhlaza » Imvelo » Ukusebenzisa kabusha » Imibono yokusebenzisa kabusha
Izimbangela zomphumela we-greenhouse